Fashion Sense of Women | The World of Pinkgold
Fashion Sense of Women
Posted on January 10, 2008 by cuttiepinkgold
ကျွန်မတို့ လူသားတွေအသက်ရှင်နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်မှာ အမျိုးမျိုးသော ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖက်ရှင်ကို လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ခြင်းဟာလည်း နေ့စဉ် Lifestyle တွေထဲက မရိုးနိုင်တဲ့ ပြောင်းလဲခြင်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဖက်ရှင်ပြောင်းလဲမှုဟာ ခေတ်အလိုက်သာမက အသက်အရွယ်အလိုက် လူတန်းစားအလိုက် ကွာဟမှုရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကဲ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ရွေးချယ်ဝတ်စားနေကြတဲ့ ဖက်ရှင်တွေ ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့ ဟန်ပန်မူယာတွေနဲ့ စတိုင်လ်ကို ဖော်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာလည်း အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနေနေ လုံးဝ Smart ဖြစ်အောင် နေထိုင်တတ်တဲ့ သူမျိုးတွေပဲပေါ့။ သူတို့တွေဟာ ခေတ်ကိုမျက်ခြေပြတ်မခံတဲ့ သူမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်ကျကျနေရတာလည်း နှစ်လိုတဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် Fashion Trend တိုင်းကို လိုက်လံတုပ ၀တ်ဆင်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ခေတ်မီတယ်၊ ဖက်ရှင်ကျတယ်၊ မိန်းမဆန်တဲ့ ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ နဲ့ပြည့်စုံနေသူမျိုးပေါ့။ သူတို့တွေဟာ shopping ထွက်ရတာကို နှစ်သက်တတ်ကြပြီး၊ stylish and smart ဆိုတာကတော့ မွေးရပါ talent အဖြစ်ပါလာတတ်ကြသူတွေပေါ့။
Trendy Comfy Casuals (Key Target)
သူတို့လေးတွေ အဓိကဦးစားပေး ရွေးချယ်တဲ့ စတိုလ်မျိုးကတော့ သက်တောင့်သက်သာရှပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတဲ့ စတိုင်လ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့တွေဟာလည်း Fashionable clothes and shoes တွေကို စိတ်ဝင်တစ်စားရှကြပါရဲ့။ သူတို့တွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုကတော့ Casual Fashion ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ Lifestyle ကို အ၀တ်အစားတွေကနေတစ်ဆင့် ပြသရတာ ကျေနပ်ကြသူရယ်ပါ။ အ၀တ်အစားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ချက်အပြည့် ရှိကြပြီး သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်း အမြဲတမ်း comfort ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။
သူတို့တွေကတော့ လွပ်လပ်မှုကို ဦးစားပေးတဲ့ သူမျိုးတွေပေါ့။ သက်တောင့်သက်သာ နဲ့ အလွယ်တကူ ၀တ်ဆင်လို့ရတဲ့ သာမန်မ၀တ်တွေကိုပဲ နှစ်သက်ကြသူတွေပါ။ သူတို့တွေဟာ ဖက်ရှင်တွေကို သိပ်စိတ်ဝင်စားမှု မရှိကြသလို Brand စွဲလည်း မရှိကြတဲ့ သူမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်သလိုနေထိုင်တတ်ကြတဲ့ သူမျိုးတွေလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဘယ်နေရာကိုမဆို ထသွား ထလာဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့ စတိုင်လ်မျိုးကိုပဲ နှစ်သက်ကြတဲ့ သူမျိုးတွေပေါ့ရှင်။
သူတို့တွေကတော့ သွားမယ့်နေရာအလိုက် အ၀တ်အစားတွေ ဖက်ရှင်တွေ ပြောင်းလဲ တတ်သူမျိုးပေါ့။ Style, quality ဆိုတာမျိုးကို သေချာဂရုစိုက်တတ်သူမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး၊ ဖက်ရှင်တွေကိုလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းနေဖို့ နှစ်သက်သူတွေပေါ့။ ဥပမာ. အ၀တ်အစားအတွက်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရောင်တွေချည်းပဲ ၀တ်ဆင်နေတတ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ၊ အရောင်အသွေးစုံ ကာလာစုံပြောင်းလဲ ၀တ်ဆင်သူမျိုးပေါ့။ ၀တ်စားထားတဲ့ ၀တ်စုံမျိုးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Fashion Accessories တွေကိုလည်း တွဲဖက်ဝတ်စားတတ်သူတွေပါ။
Classics (Aged 45+)
သူတို့ရဲ့ နေထိုင်ဝတ်စားမှုပုံစံဟာ သူတို့တွေရဲ့ Personality ကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်။ ထသွား ထလာ အ၀တ်မျိုးကို ၀တ်ဆင်ချိန်မှာတောင် သပ်ရပ် သပ်ရှင်းအောင် ၀တ်တတ်သူမျိုးတွေပေါ့။ သူတို့တွေဟာ traditional and classic fashion မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပြီး၊ ဖက်ရှင်ထက် quality ကိုအသားပေးတတ်ကြသူမျိုးတွေပေါ့။ သူတို့ရဲ့ အ၀တ်ဗီဒိုတွေထဲမှာလည်း အပေါ်အောက် လိုက်ဖက်တဲ့အ၀တ်အစားတွေကို အမြဲတွဲလျက်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အ၀တ်အစားတွေကိုလည်း အရမ်းဂရုစိုက်တတ်ကြပြီး သပ်ရပ် သန့်ရှင်းမှုကိုလည်း အလေးပေး ဆောင်ရွက်တတ်ကြပါသေးတယ်။
ဒီလိုမျိုးလူတွေ မဟုတ်ပဲ ဖိုသီ ဖတ်သီ ဖြစ်သလိုဝတ်စားတတ်ကြတဲ့ သူမျိုးကိုလည်း ကျွန်မတို့တွေ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုလူတွေကို တွေ့မြင်တဲ့အခါ သူတို့တွေ အပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုသဘောထားလေ့ရှိပါသလဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဘိုးဟာ စိတ်ဓါတ်ကိုကြည့်ပြီး အကဲဖြတ်တာ ဖြစ်ပေမယ့်လို့ လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ အခါမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ First Impression ဆိုတာကိုလည်း ထည့်မတွက်လို့မရပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ရိုးသားတဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိနေပါစေ သင့်တော် ကောင်းမွန်တဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးကို ရွေးချယ်မ၀တ်တတ်ဘူးဆိုရင် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ လူဝင်ဆန့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်ရှိစေဖို့၊ လူတကာကြားမှာ စူပါစတားဖြစ်အောင်နေဖို့ Fashion ဆိုတာလည်း ဂရုစိုက်ရမယ့် အချက်ထဲမှာ တစ်ချက်အပါအ၀င် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူရော လက်ခံလိမ့်ထင်ပါတယ်ရှင့်။
ကောင်းကင်ကို on January 10, 2008 at 2:22 pm said:
အပေါ်ဆုံးပုံရဲ့ ညာဘက်က ကောင်မလေး ….အဲလေ….Fashion ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အဟီး 😀
thamudayanwe on January 11, 2008 at 6:04 am said:
hi, i read ur 100 posts.when i read the first paragraph,i feel happy,after that i feel sad for the youth of Myanmar future life.
Inn…how can i say…
Yan on January 11, 2008 at 6:18 am said:
ညီမလေးရဲ့ မျှော်မှန်းလစာက ဒေါ်လာနဲ့လားဟင်. ဟတ်ဟတ်ဟတ်
ပင့်ဂိုးလ်လေးရဲ့ စိန်ရတုမြောက် ပို့စ်လေးကို ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်.
ဒီ့ထက်ပိုပြီး လူချစ်လူခင်များ ကျော်ကြားပါစေဗျား
Scarlet Johanson, Jessica Alba, တို့ထက် ပိုပြီး နာမည်ကြီးပါစေဗျားးးး
May you be the best in mymarblogocelebrities….
သဇင်ဏီ on January 14, 2008 at 6:00 am said:
မမ.. မီးက ၄တန်းအောင်ပါရှင့်..
ဟိုလေ.. တွတ်ပီတို့.. တာရာပွကြီးတို့ကိုဖတ်ပါတယ်..
ကလိုစေးထူး on January 14, 2008 at 11:28 pm said: